Indonezia: Tsy meloka i Prita hoy ny fitsarana ambony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2019 4:04 GMT
Herinandro vitsy lasa izay, nomelohin'ny Fitsarana ao amin'ny Distrikan'i Banten ho nanala-baraka ny hopitaly izy ka nandidy azy handoa 204 tapitrisa Rupiah, manodidina ny 21.680 dolara (azo vakiana ato sy ato ny tantara maro hafa).
Araka ny gazety eo an-toerana kompas, mandra-pahatongan'ny 20 Desambra, nahatratra 825 tapitrisa Ropia ny fanomezana aho an'i Prita (manodidina ny 87.812 dolara amerikana). Avy any amin'ny zoron'ny vondronosy rehetra, famindram-bola amin'ny aterineto nataon'ireo Indoneziana any ampitan-dranomasina, na koa fampisehoana nataona mpanakanto malaza ireo fanomezana ireo.
Marihot Purnomo nanoratra tao amin'ny bilaogy Kompasiana:
Ny fahafahan'i Prita dia hita toy ny tsirim-panantenana hisian'ny rafi-pitsarana tsara kokoa ao amin'ny firenena izay miezaka manafoana ny Mafia ara-pitsarana, ny vondrona polisy, mpitsara sy mpampanoa lalàna mpanao kolikoly.
Bilaogera Petrus Rampisela nanoratra hafatra am-pitiavana ho an'ilay mpitsara ao amin'ny Fitsarana Ambony Tangerang
Tamin'io andro io, natao ny fitsarana an'i Prita, nanambara tamin'ny gazety ny minisitry ny serasera sy ny fampahalalam-baovao, Tifatul Sembiring fa nanaiky handinika ny lalàna mifehy ny aterineto ny governemanta ary vonona ny hifanakalo hevitra sy handray ny hevitra avy amin'ny vahoaka izany ny governemanta izany. Na izany aza, tsy afaka niteny i Tifatul hoe rahoviana no hanomboka ny fanitsiana ny lalàna.